Lisitry ny masontsivana ara-teknikan'ny milina fanamafisam-peo multilayer
Ny haben'ny efitrano fandrakofana
Ф1050 × 1250, 304 inôksa.
Ny haben'ny atin'ny fonon'ny rindrina
Ny fonosana fampitaovana dia 1680mm ambonin'ny tany, mety amin'ny haavon'ny asa ergonomika.
Ny fonosana fampitaovana dia 1468mm ambonin'ny tany, mety amin'ny haavon'ny asa ergonomika.
Ny fonosana fampitaovana dia 1510mm ambonin'ny tany, mety amin'ny haavon'ny asa ergonomika.
1.Kapila vita amin'ny zoro tokana, hihaona amin'ny mpanjifa’ mila fitoviana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.Rotation 5-30r / min, fiovana hafainganam-pandeha tsy misy dingana.
2.Ny kapila vita amin'ny zana-kazo telo, revolisiona sy fihodinan'ny planeta, hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa amin'ny fahafaha-mamokatra hatramin'ny faratampony .Rotation 5-30r / min, fiovana hafainganam-pandeha tsy misy dingana.
Misy amin'ny tapa-efatra, ny zoro ny fononteny azo ovaina, hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa ny fitoviana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.Rotation 5-30r / min, fiovana hafainganam-pandeha tsy misy dingana.
Kapila vita amin'ny zoro tokana, hihaona amin'ny mpanjifa’ mila fitoviana amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.Rotation 5-30r / min, fiovana hafainganam-pandeha tsy misy dingana.
Unit: paompy miparitaka DIP-12000 (Leybold), Roots pump pump ZJY-300, paompy mekanika 2X-70, paompy fikojakojana 2X-8.Ny fantsona dia 304 inôksa.
Unit: Diffusion pump KT-400 (Zhenhua), Roots pump pump ZJY-150, paompy mekanika 2X-70, paompy fikojakojana 2X-8.
Unit: paompy miparitaka KT-600 (Zhenhua), Roots pump pump ZJY-600, paompy mekanika 2X-70, paompy fikojakojana 2X-8.
Unit: Diffusion pump KT-800 (Zhenhua), Roots pump pump ZJY-600, paompy mekanika 2X-70, paompy fikojakojana 2X-8.
Hamoahana farany: tsara kokoa noho ny 4 × 10-4 Pa.
Fitaovana anti-korontana, famolavolana interlock fiarovana, manual sy mandeha ho azy tsy voatery.
Fomba fanamainana amin'ny fantsom-panafanana, Fanaraha-maso PID, 350 ℃ ± 1.5 maximum ambony indrindra.
Fiakaran'ny vidim-piainana miasa
Fitaovana fanaraha-maso ny fivezivezin'ny gazy na fanitsiana tsara ny valin'ny fidangan'ny vidim-piainana.
Fanapoahana ionization vacuum
DC 3KV, 06KW rod cathode (ampiasaina hanadio ny workpiece alohan'ny coating).
Loharanon-drivotra (tsy voatery)
1. Basy elektronika TELEMARK-270 ° (nafarana), 6KW, malefaka avo 4KV-10KV azo ovaina. Fizahana toerana, scanner onja telozoro, scanner boribory, scanner spiral. mifantoka amin'ny toerana tsara, fahamendrehana ambony toerana, ary ny fiterahana azo zahana amin'ny scanning.
2. Basy elektronika ao an-trano (Zhenhua): 6KW, malefaka avo 4KV ～ 8KV azo ovaina, afaka misafidy onja telozoro, onja onja, scanner onja malalaka.
3. Ambohipihaonan'ny: savaivony enina Φ38 × 20 vilany na vava efatra Φ38 × 20 miampy vilany iray misy valizy iray misy lavaka miaraka amin'ny halavan'ny andohalambo 87 (ampiasaina amin'ny fanjifana avo ny fitaovana mampihena ny fiempoana ambany) na lavaka efatra Φ48 × 18 vilany.
Loharano Ion (tsy voatery)
1. RF (Frequency amin'ny radio) Loharano Ion (nafarana).
2. 5Loharano ion an'ny KVA Hall (novokarin'i Zhenhua), ampiasaina amin'ny fanadiovana alohan'ny electroplating na plating mpanampy amin'ny dingan'ny electroplating, izay mahasoa hanatsarana ny index bias amin'ny sarimihetsika, ny fahamafisana, ary ny hakitroky sy ny firaiketan'ilay sarimihetsika.
Rafitra fanaraha-maso ny hatevin'ny sarimihetsika (fifantenana)
1. MDC-360 kristaly mpanara-maso (nafarana) dia afaka mitahiry 1 ～ 99 sosona amin'ny fizotrany mandeha ho azy, 99 karazana data data, araka ny marina 0.5%+1? Hadisoana raikitra.2 Controller kristaly TELEMARK-880 (manafatra): dia afaka mitahiry 1 ～ 99 sosona amin'ny fizotrany mandeha ho azy, 99 karazana data data. 精度 0,5% + 1? Hadisoana raikitra.
3. TELEMARK-820 maso optika (manafatra): manangana teknolojia fandalinana teboka feno halavan'ny halavan'ny halavan'ny andrefana, ary mitsara ny faran'ny sarimihetsika amin'ny famakafakana ny fandefasana (na fisaintsainana) fiolahana ny takelaka fanaraha-maso 370-870 mm. Fahamarinana avo lenta, fanaraha-maso ny halavan'ny onja, Azo ampiasaina ihany koa ny fanaraha-maso mandeha ho azy sy ny fanaraha-maso an-tanana, avo lenta ny fampidirana.
4. TELEMARK-820 maso optika sy TELEMARK-880 kristaly maso dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fametrahana avo lenta sy avo famerenana..
5. Controller optique anatiny (toy ny 9704 monochromator mifanentana, Sns), ny halavan'ny onja dia azo ovaina avy 330 ny 870, ary ny marina dia mety hahatratra ± 1.5nm.
Miaraka amin'ny base magnetika, azo apetraka amin'ny toerana rehetra misy ny varavaran'ny efitrano malalaka sy ny kabine fanaraha-maso.
Précédent: Ny famakafakana ny olan'ny fanapoizinana sy ny mainty ny antsasaky ny kendrena aorian'ny fikororohana
Manaraka: Ahoana ny fanasokajiana ny teknolojia magnetron sputtering？